गर्मी समयमा घुइँचो लाग्ने सिन्ती झरनामा दशैँ–तिहारको समयमा पनि उत्तिकै भीड
Tue, Jan 21, 2020 at 11:04am
भ्रष्टाचारको अभियोगमा इन्टरपोलका पूर्व प्रमुखलाई साढे १३ वर्ष कैद #आहा खबर# भारतसँगका थाती विषय टुङ्गो लगाउने समय आएको छ : प्रम #आहा खबर# मेलम्चीको मुहानसम्मको सडक निर्माण शुरु #आहा खबर# कांग्रेसमा चर्कदो विवाद : अनामनगरमा रामचन्द्रको छुट्टै कार्यालय #आहा खबर# हिटरको प्रयोगमा अपनाउनुपर्छ सावधानी, नत्र ज्यान जानसक्छ #आहा खबर# हिटर बालेर सुतेका आठ भारतीय पर्यटकको मृत्यु #आहा खबर# बढ्यो सुनचाँदीको भाउ, तोलाको कति ? #आहा खबर# ‘साङ्लो’ रिलिज नहुँदै चर्चामा पूर्व मिस नेपाल निकिता #आहा खबर# नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले गरे एकीकृत जाँच चौकी 'आइसिपी' उद्घाटन #आहा खबर# १० मिनेटमा घुम्नुस्, दामोदर कुण्डदेखि त्रिवेणीधाम #आहा खबर# अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग #आहा खबर# पश्चिमी वायुको प्रभाव : वर्षा र हिमपातको सम्भावना #आहा खबर# एप्पल आइफोन ९ सार्वजनिक हुँदै, के छन् फिचर्स ? #आहा खबर# तेब्बर गतिमा फैलिँदै चीनमा कोरोना भाइरस #आहा खबर# दक्षिण कोरियामा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भेटियो #आहा खबर#
शुक्रबार, ८ कार्तिक २०७६,	– कृष्ण आचार्य .
भरतपुर, ८ कात्तिक
चितवनको कालिका नगरपालिकामा पर्ने सिन्ती झरनामा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको छ । गर्मी समयमा घुइँचो लाग्ने सिन्ती झरनामा दशैँ–तिहारको समयमा पनि उत्तिकै भीडभाड छ ।
पाँच वर्षअघिसम्म खासै चर्चामा नरहेको यो झरना कालिका नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० को सिमानामा पर्छ । त्यसयता हजारौँ पर्यटकले झरनाको आनन्द लिइसकेका छन् । झरनामा अहिले दैनिक २०० भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक आउने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
सदरमुकाम भरतपुरबाट २४ किलोमिटर पूर्वमा रहेको यो झरना पुग्न शक्तिखोर हुँदै दोगरासम्म गाडी चढेर जान सकिन्छ । शक्तिखोर–सिद्धी सडकखण्डअन्तर्गत दोगराबाट साढे दुई किलोमिटरको दूरीमा रहेको सिन्ती झरना पैदल हिँडेर ४५ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । चितवनको गर्मीले आत्तिएकालाई शीतल आनन्द दिने सबैभन्दा नजिकको झरना बनेको छ सिन्ती । सिन्ती झरनाले त्यहाँ पुग्ने सबैको मन लोभ्याउने गरेको छ ।
भरतपुरबाट पहिलोटक सिन्ती झरना आउनुभएका रोशन पौडेल सिन्तीको शितलताले मन चङ्गा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उकालो चढ्दा यो बाटो फर्किएर आउँदिन भन्ने लागेको थियो तर सिन्तीमा आइसकेपछि सबै बिर्सिएँ ।” उहाँले झरना क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापनको अभाव रहेको त्यसमा ध्यान दिन नगरपालिकालाई आग्रह गर्नुभयो ।
महाभारत पर्वत शृङ्खलाअन्तर्गत सिन्ती खोलाको मुहानबाट निस्किएकाले यसलाई सिन्ती झरना भनिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । झरनाको लम्बाइ करीब ४० मिटर र चौडाइ करीब सात मिटर छ । सिन्तीको तल्लो तहमा पोखरी छ । सिन्तीमा जाडोको तीन महीनाबाहेक अन्य समयमा यहाँ पर्यटकहरु आउँछन् ।
झरनामा रमाउन र नुहाउनका लागि मानिस समूह–समूह बनाएर आउने गरेको कालिका पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष हिम्मत पुरीले बताउनुभयो । यहाँ आउने अधिकांश पर्यटक आन्तरिक हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । झरनामा क्यानोनिङका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) निर्माणको काम भइरहेको पुरीले जानकारी दिनुभयो ।
पर्यटकको सङ्ख्या दैनिकरूपमा बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले पनि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । गत वर्षको बजेटबाट झरना नजिकै पुरुष र महिलाको छुट्टाछुट्टै कपडा फेर्ने कोठा, दुई स्थानमा शौचालय र झरनासम्म पुग्ने सिँढी सुधारको काम गरेको नगरपालिकाका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको तर्फबाट रु ४० लाख र प्रदेश सरकारको तर्फबाट रु ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल भ्रमण वर्ष नजिकिँदै गर्दा सिन्ती झरनालाई जिल्लाकै पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास र प्रचारप्रसार गर्ने प्रमुख श्रेष्ठको धारणा छ ।
“यस वर्ष झरनामा आवश्यक भौतिक संरचनासँगै व्यवस्थापनमा ध्यान दिन्छौँ”, प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कर्मचारी राखेर दैनिक सरसफाइसमेत गर्छाँै ।” उहाँले पर्यटकबाट केही शुल्क उठाएर भए पनि व्यवस्थापनको पक्षमा ध्यान दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीयवासी तिलक मगरले सिन्ती झरनामा पर्यटक आकर्षित गर्न पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “पर्यटकलाई आउने बाटो सजिलो बनाउने हो भने अझै धेरै पर्यटक यहाँ आउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो । पहिले सुनसान हुने झरना क्षेत्रमा अहिले पर्यटकको चहलपहलले उत्साहित बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
यस वर्ष नगरपालिकाले झरनाको द्वार निर्माण, बाटोघाटो सुधार, सरसफाइ, विश्रामस्थल, वनभोजस्थललगायतका संरचना निर्माण गरिने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञ पुरीले जानकारी दिनुभयो । झरनास्थलसम्म बिजुली बत्तीको व्यवस्था, झरना जाने पैदलमार्ग सुधार एवं निर्माण गर्नेजस्ता योजना नगरपालिकाले बनाएको उहाँले बताउनुभयो । “सिन्ती झरना नगरपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम गर्छौँ ।”
‘भ्रमण वर्ष २०२०’ को भव्य उद्घाटन
पर्यटन प्रवद्र्धन गरेर आर्थिक समृद्धि ल्याउँछौँ : प्रचण्ड
एक्कासि बाजासहितको स्वागतले पर्यटक छक्कै
स्वयम्भूलाई पर्यटक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने
भ्रमण वर्ष २०२० : बाँके निकुञ्ज मुख्य गन्तव्य
भ्रमण वर्ष २०२० आजदेखि शुभारम्भ हुँदै, दशरथ रङ्गशालाबाट औपचारिक उद्घाटन
बुधबारदेखि भ्रमण वर्ष २०२० शुभारम्भ हुँदै
भ्रमण वर्ष : नेपाल प्रवेश गर्ने पहिलो पर्यटकलाई सम्मान
पर्यटनमन्त्री भन्छन्, ‘अबको यात्रा उज्यालै उज्यालोतिर’
भ्रमण वर्ष उद्घाटनको अन्तिम तयारी पूरा
भ्रमण वर्षमा पर्यटकलाई ३० प्रतिशत छुट दिइने
भ्रमण वर्ष उद्घाटनको तयारी अन्तिम चरणमा, उद्घाटको दिन दीपावली मनाउन आह्वान
नेपाल भ्रमण वर्षमा रोयल ट्रेकको प्रवद्र्धन र विकास गरिँदै
भ्रमण वर्ष लक्षित सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० : पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जुट्दै स्थानीय तह
भ्रमण वर्ष प्रदेश ३ : पर्यटन ग्राम निर्माण गरिने
पर्यटन वर्ष सफल पार्न युवा क्रियाशील हुनुपर्ने : प्रचण्ड
हिटरको प्रयोगमा अपनाउनुपर्छ सावधानी, नत्र ज्यान जानसक्छ